बालबालिकाको कान पाक्नुकाे कारण के हाे ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
बच्चाहरुलाई धेरै सताउने समस्याका रुपमा कान पाक्ने समस्यालाई पनि लिन सकिन्छ । कान पाक्ने समस्या बालबालिकामा बढी देखिन्छ। यस्तो हुनुको कारण भने बालबालिकाको भित्री घाँटीको माथिल्लो भाग र कानको मध्य भाग जोड्ने नली छोटो, सिधा र फराकिलो हुने हुदाँ हुन्छ । जसले गर्दा रुघाखोकी तथा श्वासनलीसम्बन्धी समस्याले संक्रमण गराउँछ।
बालबालिकामा नाक बन्द हुँदा, नाकभित्र र घाँटीको माथिल्लो भागमा मासु पलाउँदा र रुघाखोकी तथा पिनास हुँदा पनि कान पाक्ने गर्छ । स्तनपान गरिरहेका बच्चा वा नवजात शिशुलाई आमाले सुतेरै दूध खुवाँउदा सर्र्किदा वा उल्टी गर्दा कानमा दुध पर्याे भने पनि कान पाक्ने गर्छ ।
कानको मध्य भागमा संक्रमण हुँदा कान बन्द हुने, नसुन्ने, कान कराउने, दुखाईको कारण ज्वरोसमेत आउने गर्छ। मध्य कानको काम शारीरिक सन्तुलन ठिक राख्ने हुनाले कान पाक्ने समस्या हुँदा शारीरिक असन्तुलन हुने तथा रिङ्गटा लाग्ने पनि हुन्छ। कान पाक्ने समस्यालाई हामीले हल्का रुपमा लिएका पनि हुन सक्छौँ तर बालबालिकाको समग्र विकासमा यसले असर पारिरहेको हुन्छ । यसबाट घातक परिणाम पनि आउन सक्छ ।
कानको जाली फुटेर पिप बाहिर निस्क्यो भने दुखाइ अलि कम हुन्छ। त्यस्तो हुँदा विस्तारै भित्री कान र टाउकोको हड्डी तथा मस्तिष्कको झिल्लीसम्मलाई असर गर्नसक्छ। यस्तो हुँदा मस्तिष्कमा पिप भरिने डर पनि हुन्छ। कान पाक्ने समस्या लामो समयसम्म रहनसक्छ।
कानको बाहिरी भागमा पनि संक्रमण हुने हुन्छ । यस्तो बेला कानको लोती चलाउँदा वा थिच्दा अत्याधिक पीडा हुन्छ भने कानको बाह्य भागमा रातो हुने, सानो खटिरा आउन सक्छ। कान पाक्ने समस्या गराउने किटाणुहरु एच इन्फुएन्जा, न्युमोकोकस, स्टाफाइलोकोकस अरियस आदि हुन्।
यस्ता गल्तीले निम्तिन सक्छ कानको समस्या
शहरमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं धुलो, धुँवा र चर्को ध्वानीको घेराबन्दीमा हुनुहन्छ । यसको सोझो असर तपाईंको कानमा परिरहेको छ । अर्थात अरुको कारण तपाईंले आफ्नो श्रवणशक्ति गुमाइरहनुभएको छ ।
शहरमा हुनुहुन्न भने पनि तपाईं मोवाइलका प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ । मोवाइलमा कुरा गरिरहँदा त्यसको सोझो असर पनि कानले झेल्नुपर्छ । अझ अहिले इयरफोन ठोसेर गीत सुन्नेहरुले त श्रवणशक्ति गुमाइरहेकै छन् ।
तपाईंलाई भनिरहनु नपर्ला, कान आफैमा एक संवेदनसिल अंग हो । तर, अहिले कानको समस्या बढेको बढ्यै छ । कान चिलाउने, कम सुन्ने, पाक्ने, घाउ हुने आदि समस्या धेरैले झेलिरहेका छन् ।
कानको कारण मस्तिष्कको नशालाई समेत प्रभावित हुनसक्छ,, जसका कारण कान तथा टाउको दुख्ने गर्दछ । कान दुख्ने कारणहरुमध्य धेरै जसो कान तपाईको आˆनै गल्ती हुने गर्छ । जसलाई समयमै रोकथाम गर्न नसकेको खण्डमा यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
बेस्सरी कान सफा गरेमा
कतिको बानी हुन्छ, कान सफा गरेको गरेकै गर्ने । तर धेरै कान सफा गर्नाले पनि कान दुख्ने गर्छ । विशेषगरी, आवश्यक्ता भन्दा बढी कानको सफाई गरेमा पनि कान दुख्न सक्छ । यसको कारण के हो भने कानको सुरक्षाको लागि नै कानमा कानेगुजी पैदा हुने गर्दछ ।
यसले कानमा वाटरप्रुफको शिल्डको रुपमा काम गथ्र्यो । आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा कानको सफाईले कानको सुरक्षा पत्र हट्ने गर्छ । जसका कारण कान भित्र पानी वा व्याक्टेरिया प्रवेश गरी कानको संक्रमण हुने गर्छ ।
कानमा संक्रमण भएमा
कानमा संक्रमण भएमा पनि कानमा समस्या हुने गर्दछ । कानमा पानी पसेमा वा कुनै तरल पदार्थ भएमा पनि कानमा संक्रमण हुनसक्छ । कानको संक्रमण, दादुरा वा ठ्उलाका कारण पनि कानको सुन्ने क्षमतामा कमी आउनसक्छ । त्यसैले, कानमा कुनै तरल पदार्थ पसेमा कान राम्ररी सफा गर्नु पर्दछ ।
चोट लागेको कारण
कानमा कुनै प्रकारको चोट लागेमा पनि सुन्ने क्षमतामा कमी आउने गर्छ । त्यस्तै, विस्फोट, सवारी दुर्घटनाका कारण कानको पर्दामा प्वाल परेर कान दुख्नसक्छ । यदी दुर्घटनाका क्रममा तिब्र पीडा भएमा वा सुन्न कम भएमा बुझ्नुहोस्, कानमा समस्या भएको छ ।
इयर फोनको प्रयोग
अहिलेका युवाहरुमा इयर फोनको प्रयोग धेरै हुने गरेको पाइन्छ । इयर फोनको ज्यादा प्रयोगले धेरै मानिस बहिरोपनको शिकार हुने गरेका छन् । इयर फोनबाट आउने चर्को ध्वनीले इयर ड्रममा क्षमति पुर्‍याई पातलो बनाउने गर्छन् ।
इयरफोन बाट निस्कने तेज ध्वनीका कारण, शुरुमा कानको कोशिकामा अस्थायी रुपमा क्षतिग्रस्त हुने गर्छ । वा एउटा मात्र कानले सुन्निने गर्छ । तर यसको प्रयोग धेरै गर्नाले बहिरोपना हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
कानको सफाई गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?
कानमा तेल हाल्नाले कानको संक्रमण हुनसक्छ । त्यसैले कानमा विर्सेर पनि तेलको प्रयोग नगर्ने
कान सफा गर्न पातलो खालको चिम्टीको प्रयोग उचित हुन्छ । तर त्यस्ता चिम्टी पैयोग गर्दा चिम्टीको पुछारमा कपासको प्रयोग गर्ने । जसले कानमा घाउ हुन दिदैन ।
इयर बर्डले सफा नगर्ने । यसले कानको फोहर बाहिर निकाल्नुको सट्टा भित्र धकेलिदिन्छ ।
बाटोमा हिड्ने कुनै व्यक्तिबाट पनि कान सफा गर्नु हुँदैन । अन्यथा कानको संक्रमण हुनसक्छ ।
१. कानेगुजी पहेंलो, हरियो, कालो वा सेतो भयो भने तपाईंको कानमा संक्रमण भएछ भनेर बुझ्नूपर्छ । कानेगुजीको प्राकृतिक रंग हल्का सुन्तला र गाढा खैरो हो ।
२. कानेगुजी कत्ले खालको भयो र तपाईंको कानको प्वाल सुक्खा भयो भने एक्जेमा रोग लागेको हुन सक्छ । तर चिन्ता नलिनुस्, यो उपचारले ठीक हुन्छ ।
३. कानेगुजी गनायो भने कानमा संक्रमण भएछ भनेर बुझ्नूपर्छ ।
४. कानेगुजी नै निस्केन भने चिकित्सकको परामर्श लिनू । यो केराटिटिस ओब्टुरान्स नामक रोगको लक्षण हुनसक्छ ।
५. कानेगुजीले गर्दा कान असाध्यै चिलाउँछ र कान कन्याइरहनुहुन्छ भने तपाईंमा संक्रमण भएको हुन सक्छ ।
६. कानेगुजी बाक्लो, सुक्खा र कालो भयो भने तपाईं बूढो हुँदै जानुभएको संकेत हो । तर जवानीमै यस्तो भयो भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
७. व्यायाम गरेपछि कानमा अलिकति पसिना आउँछ । तर कानबाट लगातार पसिना चुहिन थाल्यो भने तत्काल चिकित्सकलाई भेट्नुस् किनकि तपाईंलाई कानको दीर्घरोग लागेको हुनसक्छ ।
कानभित्र एक प्रकारको तैलिय पदार्थ बनिरहेको हुन्छ, जसलाई चिकित्सकिय भाषामा ‘सिटोमिन’ भन्ने गरिन्छ । यसले कानमा जमेर बसेका फोहरलाई निकाल्ने काम गर्दछ ।
कानमा सिटोमिन बन्न कम भएमा वा बन्द भएमा कानमा फोहर जम्न सुरु हुन थाल्छ, जसलाई कानेगुजी भन्ने गरिन्छ ।
एकास्टिक न्यूरोमा एक प्रकारको ट्युमर हो, जसले क्यान्सर गराउँदैन, तर पनि यसले श्रवण क्षमतालाई कम गर्दै लगेर कहिलेकाही पटक्कै नसुन्ने बनाइदिन्छ ।
यसले अन्य थुप्रै गम्भीर समस्यासमेत उत्पन्न गर्छ । तर यहाँ समस्या के छ भने यस्तो लक्षण सजिलै देखिदैन र जबसम्म देखिन्छ , निकै ढिलो भइसक्छ ।
संसारभरमा बहिरोपन भएका व्यक्तिमध्ये ४ करोड २० लाख जनता ३ वर्षभन्दा बढी उमेरका छन् । बहिरोपन कत्तिको छ भन्ने कुरा मेशिनले परीक्षण गरेर निर्धारण गरिन्छ । सामान्यतयः २५ डेसिबलसम्मलाई सामान्य मानिन्छ ।
२६ देखि ३० डेसिबलसम्मलाई सुन्ने क्षमतामा हल्का (माइल्ड) कमी भएको, ४१ देखि ६० लाई मध्यम, ६१ देखि ८० लाई गम्भीर खालको मानिन्छ । ९० डेसिबलभन्दा बढी भएकाहरू आवाज नै नसुन्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् ।
बहिरोपन हुनुका कारणमा एउटा वंशाणुगत मानिन्छ भने अर्को गर्भमा बच्चा भएको समयमा भाइरसको संक्रमणका कारण हुन्छ । उक्त भाइरसलाई रुबेला (साइटोमेगालिभाइरस) भनिन्छ । बच्चामा जन्डीस भएमा, टाउकोमा चोटपटक लागेमा, समयभन्दा पहिला नै जन्मिएमा बहिरोपन हन्छ ।
कानमा संक्रमण (ओटिटिस मेडिया) बाट पनि बहिरोपन हुन सक्छ । यो संक्रमण बच्चा स्कुल जानुभन्दा पहिला नै देखिन्छ । सुरुमा सामान्य भए पनि पछि गएर यसले जटिल रूप लिन सक्छ ।
यसपछि बिस्तारै कानको सुन्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ । मेनिन्जाइटिस, मलेरिया, भाइरल इन्सेफलाइटिस, हर्टपिस भाइरस, अटोटक्सी ड्रगले पनि बहिरोपन निम्त्याउछ ।
तीन किसिमले बहिरोपनबाट बच्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले बच्चालाई घातक रोगका लागि भ्याक्सिन दिनुपर्छ । दोस्रो, जब रोग लाग्छ तुरुन्तै उपचार गनुपर्छ । त्यसपछि टर्सरी, जसमा रिहाविलिटेसनमा उपचार गर्नुपर्छ । यी ३ तरिकाबाट बच्चामा वहिरोपन निवारण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञको संख्या जम्मा ९७ मात्र छ । नेपालका जम्मा १२ जिल्लामा मात्र यो सेवा दिन सकिएको छ । बहिरोपन निवारण गर्न जनशक्ति कम भएका कारण काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, धरान र न्याम्समा स्नातकोत्तर तहको पढाई भैरहेकोछ ।
५ वर्षपछि हरेक वर्ष २५ देखि ३० जनशक्ति थपिँदै छ । यस हिसाबले उत्पादन भएमा १० वर्षमा मात्र नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञको जनशक्ति सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सक्छौ ।
नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञको हरेक २ वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ । जसमा देशभित्र र देशबाहिरका चिकित्सकले भाग लिन्छन् । उक्त सम्मेलनमा विभिन्न रोगका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी व्यापकरुपमा छलफल गरिन्छ ।
त्यसबाट निस्कने निचोडका आधारमा हामीले व्यवहारिक रुपमा विकास गर्दै आएका छौं । म अध्यक्ष भएका बेला सन् २०१३ को छैटौं सम्मेलनमा ‘एक्पान्डिङ होराइजन इन द फिल्ड अफ हेड एण्ड नेक सर्जन्स’ विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो ।
बहिरोपन निवारणका लागि मैले मेरो जिल्ला सप्तरीमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम चलाउँदै आएको छु । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अभियान चलाउनुपर्छ । प्रत्येक स्कुलमा बच्चा र परिवारलाई यससम्बन्धी जनचेतना जगाउनुका साथै बच्चाको कानको परीक्षण गछौं ।
परिवारले बच्चालाई बोलाउँदा कुनै वास्ता गरेन भने गाली गरिन्छ । तर उसमा बहिरोपन भएको हुनसक्छ । यसतर्फ परिवारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो किसिमको समस्या देखिएमा तुरुन्त कानको जाँच गराउन सल्लाह दिँदै आएका छौं । स्कुलमा काउन्सिलिङ गर्दा समस्या थाहा हुन्छ ।
६० प्रतिशत बच्चामा कानेगुजीका कारण बहिरोपन भएको हुन्छ । यसको निदान भनेको उसको कानबाट कानेगुजी सफा गरिदिने हो । कानेगुजीका कारण उसले सुन्दैन, भाषा तथा मानसिक विकास हुँदैन, सुस्त मनस्थितिको हुन्छ ।
यस किसिमको समस्याका साथै संक्रमित स्कुलका बच्चालाई उपचार गर्दै आएका छौं । साथै कसै–कसैको कानको जालीमा प्वाल परेको, घाउ भएको अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजले पनि लायन्स क्लबको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य सबै सेवा शिविरमै दिदै आएका छौं ।
कानको जाली प्वाल परेमा यसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । कानको नसा कमजोर भएमा सुन्ने मेसीन राखेर सामान्य बनाइन्छ । बेलुका सामान्य अवस्थामा सुतेको व्यक्ति बिहान उठ्दा कान नसुन्ने हुन सक्छ । यो एउटा भाइरसका कारण हुन्छ ।
त्यसैदिन बिरामीले जाँच गराउन सकेमा पछि सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ । तर ढिला गरेमा सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । बढी ध्वनि प्रदुषण हुने क्षेत्र, कलकारखानाका कारण कानको नशामा असर पर्न सक्छ । त्यसैगरी उच्चरक्तचाप, मधुमेहजस्ता कारणले पनि कानको नशामा असर पर्न जान्छ ।
नाक देखि कानसम्म जोड्ने स्टीच नली हुन्छ । त्यो बन्द भएमा मध्य कानको काममा अवरोध आउछ । त्यसबेला कान जोडले दुख्छ । त्यही समयमा यसको उपचार भएन भने कानमा पिप बन्छ र पिप बाहिर निस्कने बाटो हुँदैन ।
जसका कारण कानको जालीमा प्वाल परि पिप बग्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै उपचार गर्न सकेमा प्वाल टाल्न सकिन्छ । उपचार ढिला भयो भने प्वाल ठूलो हुँदै जान्छ । र अन्त्यमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाको कान जोगाउन के गर्ने ?
बच्चालाई ज्वरो आएमा वा कान दुखेमा तुरुन्तै अस्पताल लैजाने
धेरै चर्को आवाज भएको ठाउँमा बच्चालाई नलैजाने
बच्चाको कान नकोट्याउने
बच्चालाई सधै बसालेर मात्र दूध खुवाउने
पानी वा तेल कानमा नराख्ने
गर्भवतीले जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने
जैतुनको तेल पनि कानको दुखाईमा एकदमै फाइदाजनक हुन्छ । यो तेलमा दुखाई कम गर्ने गुण हुन्छ । जैतुनको तेललाई अलिअलि तातो बनाउने र कानमा हाल्ने । यसले केही बेरमै काम दुखेको ठीक हुन्छ । कपासलाई तेलमा डुबाएर कानभित्र राख्न सकिन्छ ।
मुलाको पातले कानको दुखाईलाई सजिलै ठीक गर्छ । यसका लागि मुलाको पातलाई पिसेर यसको रस निकालेर रसलाई तिलको तेलमा धेरै बेरसम्म पकाउनुपर्छ ।
जब रस वाफ बनेर उडिसक्छ, यो तेललाई कपडाले छानेर जतिबेला काम दुख्छ, यो तेललाई अलिअति तताएर दुई तीन थोपा कानमा हाल्नुपर्छ । यसबाट कान दुखेको तुरुन्तै ठिक हुन्छ ।
प्याजमा पनि दुखाई कम गर्ने गुण हुन्छ । कान दुखेको बेलामा प्याजको डल्लोलाई आगोमा सेक्नु र त्यसको रस निकालेर कानमा हाल्नुपर्छ । यसबाट तुरुन्तै आराम मिल्छ ।
कानको दुखाईमा तुलसीको पत्ता एकदम फाइदाजनक हुन्छ । यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल गुण हुन्छ । यसका लागि तुलसीको पत्ताहरुलाई पीसेर यसको रसको दुई तीन थोपा कानमा हाल्नुपर्छ ।
तुलसीको रसले कानको इन्फेक्सन ठिक गर्छ र दुखाई पनि हटाउँछ । कानभित्र घाउ भएको छ भने पनि यसले ठिक गर्छ । जटिल अवस्थामा छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
लसुनमा पनि एन्टिसेस्टिक गुण हुन्छ र यसले दुखाई हटाउँछ । यसका लागि लसुनको दुई कल्लीलाई राम्ररी पिसेर यसमा एक चिम्टी नून मिलाएर ऊनको कपडामा पोको पारी दुखेको ठाउँमा राख्दा आरम हुन्छ । यसका साथै लसुनको तीन चार कल्लीर्लाइ तोरीको तेलमा भुटेर उक्त तेललाई कानमा हाल्दा पनि फाइदा मिल्छ ।
यी हुन कानबाट थाहा पाउन सकिने रोग
यदि तपाईको कानको आकार बिग्रन थालेको छ भने पनि यो ठूलो रोगको संकेत हुन सक्छ । कानको आकार बिग्रनु भनेको मिर्गौला सम्बन्धि रोगको संकेत पनि हो ।
दुवै कानमा लामो समयसम्म चिलाउने समस्या भएमा भने फंगल इन्फेक्सन हुनसक्छ । फंगल इन्फेक्सनले कानमा निकै दुखाईको अनूभूतिसमेत गराउँछ ।
यदि लामो समयसम्म कानले कम सुन्न थालेमा सजग हुनुपर्छ । किनकि डायबिटिजका कारण पनि यस्तो हुन्सक्छ । डायबिटिज हुने समय रक्तसंचारको सन्तुलन बिग्रिन जान्छ र कानसम्म सहि ढंगले रगतको चाप पुग्न सक्दैन् ।
एक वा दुवै कानका इअर लोब लत्रिन थालेमा बुज्नुपर्छ कि यो हर्ट डिजिजको समस्या हुन् सक्छ । किनभने, कानको नसा शरीरका थुप्रै अंगका नसासंग जोडिएका हुन्छन् ।
त्यसैले मुटु सम्बन्धि नसामा समस्या आएमा कान लत्रिन सक्छ । यस्तो संकेत पाउननासाथ चिकित्सककहाँ जानुपर्छ ।
Don't Miss it यस्ता राेगहरुकाे समाधान गर्न दैनिक दुई घण्टा उभिऔँ
Up Next नेवारी खाजा मनपर्छ ? अब यसरी घरमै नेवारी खाजा बनाउनुहोस्